Vonjeo Razily: Amin’ny Teny Malagasy | For Razily and all those who are missing in Madagascar
« Razily marching on
Petition: Concerns for Razily, protester arrested in Antananarivo, Madagascar on March, 28th »
Vonjeo Razily: Amin’ny Teny Malagasy
Hatramin’ny nisamboran’ny miaramila azy dia tsy hita intsony na Razily, izay hita mitondra ity saina eto amin’ity sary ity, na ny namany. Manay izahay ny momba azy. Matahotra izahay sao dia maty izy na voa mafy ny toe-batany.
Ny vaovao farany momba an-dRazily sy ny namany dia hoe ny nisamborana sy nanesorana azy teo amin’ny toerana filaharana. Nilaza tamin’ny fomba ofisialy moa ny tafika fa Razily sy ny namany dia hotsaraina fa “nangalatra saina”. Tsy nisy fanambarana hafa momba an-dRazily sy ny namany : tsy nisy vaovao momba ny hitsarana azy ire, tsy nisy vaovao momba ny hoe nalefa aiza izy, tsy fantatra na maty na velona.
Izahay teratany sy naman’i Madagasikara dia mahalala fa fotoana manahirana amin’ny tantaran’ny firenena izao. Ity korontana ity dia niteraka fahasahiranana ho an’ny Malagasy maro be, ary aina maro no efa nafoy hatramin’ny niatombohan’ity korontana ity tamin’ny volana Janoary. Izahay koa dia manahy ny fiaratsian’ny demokrasia sy tsy fanajana intsony ny fahafahana maneho hevitra any Madagasikara.
Ny anton’ity fakana sonia ity dia ny fanehoana ny tsy fankasitrahanay :
1) Ny tsy fisian’ny mangarahara eo amin’ny fitsarana amin’ny resaka fisamborana politika. Mamporisika ny mpitandro filaminana izahay mba hanome vaovao momba an-dRazily sy ny namany, ary koa mba hanome daty hoe rahoviana no ho tsaraina Razily sy ny namany, ary koa ireo mpaneho hevitra rehetra hafa ka nosamborina.
2) Ny tsy firaharahiana mihamibahana eo amin’ny fahafahana maneho hevitra any Madagasikara, na eo amin’ny filazana vaovao na mandritry ny fihetsiketsehana an-dalambe, araka ny nolazain’i Reporters Sans Frontieres.
3) Ny fampiasan’ny miaramila be loatra fitaovampiadiana ka miteraka ratra eo amin’ny olontsotra, indrindra moa fa ny ankizy.
Mahita koa izahay ny tsindry lehibe apetraky ny korontana eo amin’ny fiarahamonina Malagasy. Mangataka amin’ny governementa tetezamita izahay mba hamporisika ny fiombonana manerana ny nosy sy hetsika milamina avy amin’ny roa tonta mba tsy hisian’ny fitomboan’ny hery setra.
Ity fakana sonia ity dia ho ampitaina amin’ny lehiben’ny fitandroan’ny filaminan’ny Governementa tetezamity : Commandant charles Andriantsoavina.
Miangavy anao hanohana an’ity fakana sonia ity amin’ny fanomezana sonia ao amin’ny faritra fametrahana hafatra na koa ao amin’ny fanisana hevitra.
Hevero ihany koa ny mandefa ity any amin’ny mpisolo vava anao, na any amin’ny biraon’ny Sekretera Jeneralin’ny Firenena Mikambana inquiries@un.org mba hamporisihana ny firenena hafa mba hitsara ny mpanao politika amin’ny zavatra vitany.